Didy folon'ny fanabeazana – FJKM Ambavahadimitafo Didy folon'ny fanabeazana |
Didy folon'ny fanabeazana
1- Ny zaza TENENIN-DAVA dia ho tonga MPAMALIVALY
Koa mahaiza miteny azy amim-pitiavana sy amim-pahendrena fa aza treronina latsalatsaina
2- Ny zaza KAPOHIN-DAVA dia ho tonga MPIADY LAVA. Tsy midika velively izany fa tsy ho azo kapohana ny zaza maditra, fa ny matetika loatra kosa dia tsy rariny ary mitarika ny zaza ho lasa hamaly faty any ivelany.
3- Ny zaza VOASAZY LAVA dia hihevi-tena ho DISO LAVA (esprit de culpabilité) : mahomby lavitra ny fankaherezana azy amin’izay ezaka kely mba ho vitany.
4- Ny zaza HENOIN-TENY dia HAHAY HIHAINO NY HAFA. Koa raha miteny sy miresaka aminao ny zanakao dia henoy izy, fa aza revo na varian-dava amin’ny adim-piainana.
5- Ny zaza ANKAHEREZINA dia HAHAY HAHAZO ZAVATRA, ho tia karokaroka, fa tsy hionona amin’izay eo an-tanany.
6- Ny zaza OMEN-TSITRAKA dia HAHAY MANKASITRAKA. Omeo sitraka hatrany ny zaza amin’ireny asasoa kely mba vitany ireny, sy izay ezaka nataony, na dia heverinao ho tsy ampy sy tsy misy dikany aza, fa aza dia ny ditrany ihany no avoitra.
7- Ny zaza MAHATSAPA NY FAHAMARINANA dia HANAO MARINA. Aoka ho teny marina no holazainao azy, ary tsapany sy hitany fa marina : « Ny atao mahatarika », ary « Ny teny fitaka fa ny atao no hita ».
8- Ny zaza MIAINA AO ANATIN’NY FILAMINANA dia HATOKY NY ATAONY. Koa tandremo tsara mba tsy hikorotan-dava ny fiainanareo, fa misy fiantraikany ao amin’ny zaza sy ny asany izany.
9- Ny zaza MAHAZO DERA dia HAHATOKY TENA.
10- Ny zaza MIAINA AO ANATIN’NY FITIAVANA dia HO TIA NAMANA.
Farany, tadidio fa : matetika noho ny zaza tia fakan-tahaka ny ao an-trano dia ny rivotra iainany, na ny zavatra hitany ao amin’ny fianakaviana ihany no etiny miaina hatraiza hatraiza. Noho izany, IANAO, IZAHO, ISIKA iza samy maniry hanan-janaka mendrika, tsara taiza ary olom-banona dia aoka HIARA-MANABE ary HIFANABE amin’izay rehetra ataontsika sy iainantsika.